EGO Mabhazi Acha Kupa Mahara Sevhisi Kune Vagari Vanobviswa Kubva KuBhan | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYCentral Anatolia Region06 AnkaraEGO mabhazi achapa mahara basa kune vagari vanoregererwa kubva pakurambidzwa
22 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, GENERAL, HIGHWAY, Tire Wheel Systems, musoro wenyaya, TURKEY
Ankara Metropolitan Municipality yapedza kugadzirira Eid al-Fitr. Kunze kwemigwagwa uye maboulevards eBaşkent, mabasa ekuchenesa anoitwa mumakuva, nepo Mapurisa eDhipatimendi zvikwata vakasimbisa kuongorora kwavo chikafu kunyanya kumakambani anogadzira maswiti. Dambudziko reDesiki, Başkent 153, ASKİ, Ankara Fire Brigade uye Zvikwata zveMapurisa zveMapurisa zvichashanda pane makumi maviri nematanhatu (7/24) panguva yemabiko, kusanganisira zuva raArife. Halk Ekmek Retail Stores uye halk Ekmek buffets richava rakazaruka chete pakati 23-3 musi May 26, Mugovera uye yechi10.00 yaMay. Science uye ASKİ zvikwata richaramba zvavo kwezvivako uye superstructure mabasa. Mabhazi eEGO anotakura vagari veMakara mahara panguva yezororo renyika nerechitendero anoshandawo vagari vanoregererwa kubva pamusha.
Ankara Metropolitan Municipality yakapedza kugadzirira kwayo mukati medhorobha pamberi pemutambo weRamadan, unozopfuura pasi pemumvuri wekusvika nguva nekuda kwedenda re coronavirus gore rino.
Baskent 153, Callen Desk, EGO uye ASKI General Directorate, Ankara Mapurisa uye Metropolitan Fire Dhipatimendi vachashanda 7/24 kuzadzisa zvinodiwa uye kudiwa kwevagari veA Ankara panguva yezororo.
EGO BUSES KUTI VATSHURE BASA REMAHARA
EGO General Directorate, iyo ichapa zvifambiso zvevoruzhinji pakati pemamwe maawa muna Chivabvu 23, ichapa rubatsiro rwemabhazi rwemahara pakati paMay 24-26, kunze kwemafambisi ezvitima, zvinoenderana nesarudzo yeProvince General Sanitary Board yeProvince Utongi hweA Ankara:
- Chivabvu 23, 2020: 07.00-20.00
- 24-26 Chivabvu 2020: 07.00-09.00 uye 16.30-20.00
Munguva yemutambo weRamadan, uko kune danho reMetropolitan Municipality Assembly yekupa pachena basa rekufambisa pamazororo echitendero neenyika, vagari vemu Ankara vanoregererwa kubva nguva yekubvakacha vanozogona kubatsirwa kubva kumabhazi eEGO mahara.
Hofisi DZEMAHARA DZINOGADZIRIRA ZVAKANAKA ZVEZVIDZO
Kuwedzera maitiro ezvekuongororwa chikafu kunoitwa nevagari kusvika kune hutano chikafu isati yezororo, Ankara Mapurisa; Inoenderera mberi ongororo yayo kumabhizinesi inogadzira nekutengesa zvigadzirwa zvebheka uye zvigadzirwa zvinotapira.
Matanho epamutemo anotorwa nekuda kwekushomoka kunoonekwa mune ongororo dzinoongorora kana zvichiteerana nehutano, hutsanana, mutero peturu uye denda re coronavirus, kutevedzera mashandisiro emasiki, magurovhosi, mapendero, mapfupa uye michero, kureba kwenzvimbo, huwandu hwevashandi nevatengi kunoongororwa.
Vachitaura kuti Dhipatimendi reMapurisa reA Ankara richaongorora zvakare kana mabhizinesi nemabhizinesi akavharwa mazuva ekubvumirwa, Metropolitan Municipality Police department Head Mustafa Koç akapa ruzivo runotevera.
"Pakati pemazuva ano, patiri kugadzirira kusangana neakarumbidzwa Eid al-Fitr nevanhu vedu vemuAzara mamiriro ekurwisa denda, zvikwata zvedu, izvo zvinofambisa nguva dzese nguva, zvinoramba zvichitungamira mukati meguta rese. Mukati, tine zvikwata zvinokurumidza kupindura zvichemo zvinosvika kuBaşkent 153 line. "
CEMETERO YAKADZIDZA KUENDA
Dhipatimendi reMakuva rakagadzirisawo kuchenesa makuva pamberi peRamadan Ramadan uye ndokuvagadzirira kushanya.
Kunze kwematunhu ese makuru KarşıyakaPanguva yekuchenesa kwaiitwa Ortaköy, Cebeci Asri, Gölbaşı, Bağlum uye Sincan Cimşit Cemeteries, kutarisirwa kwakatorwa kuti kuve nechokwadi chekuti kutaridzika kwakazara kwemakuva ayo akazara nemafashama pamberi pemabiko nekuda kwekuuya kwepamberi kuiswa, airatidzika akachena, akachena uye akachengetedzwa.
Mukati meyero yemabasa umo miti yaive mumakuva yakachengetedzwa, matavi emuti akaomeswa akatemwa, nemasora zvakare. Kuchenesa kwakanaka kunoitwa mumakuva mune makuva umo hama dzaibvumirwa kushanya pazuva rekutanga remabiko.
Vachitaura kuti vakatanga gadziriro yemabiko mwedzi 1 wadarika mumakuva ese, Mutungamiriri weDhipatimendi Remakuva Köksal Bozan akati:
"Mukuwirirana nemirairo yeMeya wedu Mr. Mansur Yavaş, kwete chete makuva epakati asiwo makuva ese emudunhu akacheneswa. Kuchenesa uye kugadzirisa basa kwapera muna 6 makuva edu ari pakati. Takatanga kugadzira moto zviyero pamasuwo ekupinda mugari edu akauya kuzoshanya, isu tinopa zvakare masks kune avo vasina mask. Vehukama vevafira kutenda vachakwanisa kushanyira vakafa pazuva rekutanga kwehoridhe vachiteedzana nedenderedzwa reInternational Ministry. "Makuva edu achavhurwa nekushanya kwevagari vedu vasina nguva yekubva panguva yekudzoka."
ANKARA Fire Brigade IYO NECAPITAL 153 Uye CRISIS TABLE ICHAITA POST 7/24
Baskent, inoshanda sebhiriji rekutaurirana pakati peguta guru neMetropolitan, ichashanda pane makumi maviri nemana.
Iyo Callen Desk uye Psychological Support mutsara wakasimbiswa panguva yechirwere checyonavirus ichaenderera mberi ichishanda kusvika kune zvido zvevagari mukati mehoridhe. Vagari veA Ankara vachakwanisa kuendesa zvichemo zvavo uye zvichemo kuMetropolitan Municipality kuburikidza neCallen Desk runhare nhare 0312 666 60 00 kana kuburikidza neCastle 153.
Ankara Fire Dhipatimendi richashanda 46/7 pazviteshi 24 pamwe chete nematunhu. Vagari veBaşkent vachakwanisa kutaurira zvingabvira moto mishumo kuburikidza ne112 Emergency Call Center.
HANGERI NESAYENSI DZINOSHUMA PASI
ASKI General Directorate ichaenderera nekupa masevhisi kuCapitals, 7/24 pamwe nevashandi vayo.
Kana pakushaiwa mari nekukurumidza, vagari vanokwanisa kusvika ASK the kuburikidza ne emergency call centre "0312 616 10 00" kana kuburikidza neFriday 153. Zvikwata ASKİ, izvo zvicharamba zvichizopa mafoni masevhisi pamaawa makumi maviri nematatu muCard Counter Kutadza Kuchengeta nekugadzirisa masevhisi; Kadhi kupikisa kutengeserana kwevakaremara vagari, vatano nevekuchengetedza vashandi, kunyanya vagari vanopfuura makumi matanhatu, vanoenda kumakero avo.
ASKI General Directorate sevhisi yebasa ichavhurwa pakati pe4-08.00 kwemazuva mana ekutsiva, kuvandudza, uye kurodha masevhisi emakadhi ekadhi emagineti. Zvikwata zvichapfuurirawo kuputsa kwavo, basa rekugadzirisa nekuvaka zvivakwa pasina kukanganisa.
Sechikamu chekurwira kukonzeresa, Dhipatimendi reSainzi, iro rakawedzera nguva yekusimuka pakupera kwevhiki, richaramba richishanda pamabiko. Zvikwata zveScience Affairs department, izvo zvichaita basa rekuisa nekugadzirisa basa mukati uye matunhu ese, zvichapa kutaridzika kwemazuva ano uye kutyaira mumigwagwa yemaguta.
ZUVA RINOTAURA MUCHIPIKI
Zvikwata zveDhorobha Aesthetics zvakare zvakakurudzira basa rekuchenesa muguta pamberi pemutambo weRamadan.
Mukuwedzera mumigwagwa uye boulevards pamusoro Ankara, zvikwata kuti kuita Washing kuvhiyiwa panguva zvemabhazi, zvigaro, menzira, dzinoungana uye zvipingamupinyi panguva nechepakati pfungwa dzakadai Ulus uye Kızılay vakagadzirira guta pamutambo. Vanyatsochinja motokari uye Mobile zvikwata acharamba kushanda iri 7/24 hwaro pamutambo hwaakange kusvika pamba nenguva yakatarwa achashanda kwenguva achipenya Ankara.
TENDA KUVAKA KUTI UVHURE KUTI ZUVA ROKUPEDZISIRA PAMWE HERE NEHOLIDAY
Iyo Metropolitan Municipality Public Bread Factory, inova chiratidzo mumadhorobha, yakatemera hurongwa hwekushanda kweMutambo weRamadan.
Halk Ekmek, inoenda kunoronga mazuva nemaawa ekushanda kuti asangane nezvido zvekudya zvevagari uye anotakura zvigadzirwa zvevagadziri vemuno kumasherufu ayo, akapa baklava nedessert mhando dzakanyatsogadzirirwa kumutambo uyu kuravira kwevamaburu.
Halk Ekmek Retail Stores uye halk Ekmek buffets richava rakazaruka chete pakati 23-3 musi Saturday, May 26rd, Chipiri, May 10.00th, zuva racho rechitatu.
Zvichitevera pakatanga intercity kufamba pashure vagari makore 65 uye pamusoro vakapiwa rusununguko kuenda kumba, zviyero zvose zvakafanira vakatorwa pa AŞTİ. Nepo vanhu vane mvumo okufambisa havasi kuendeswa AŞTİ pasina asingazivikanwi, kuchengeteka matanho vari kuendeswa yakakwirira yakati sandara.
EGO mabhasi achapa basa risina basa zvakare
EGO Mabhazi muAnkara Free
Ego Mabhazi Free
15 muBatman Mabhazi Ose Achasununguka Muna July
High-speed motokari muUkraine yakasunungurwa kubva kuVAT
3. nhandare yemhepo inofanirwa kuti inoregererwa mushumo weEIA
Dare haigone kusunungurwa kubva kuGulf Crossing Bridge EIA
Motokari ichasunungurwa kubva kuPublic Procurement Law kusvika ku2023!
Bhiriji rechitatu harisi kubhadhara VAT.
Vashandi vekurima, Chikara uye Chikafu Chikafu Vachasunungurwa kubva kuCurfew
EGO mabhazi anobatanidzwa mukati metro
IMM Free Towing Service kuvanhu
EGO Mabhazi paKuzere Kubata Ankara Service
EGO Mabhazi Akadzivirirwa
Manisa Metropolitan 15 Inotakura Vanhu Kuzvikwereti Muna July
EGO Mabhasi Anogadzirira Winter